पत्रिकाका उपहार कार्यक्रम पाठकलाई लोभ्याउने कि झुक्याउने ? -
Home / Uncategorized / पत्रिकाका उपहार कार्यक्रम पाठकलाई लोभ्याउने कि झुक्याउने ?
Lila Jhapali March 3, 2018	Uncategorized, आर्थिक, मुख्य खबर, विचार, समाचार Comments Off on पत्रिकाका उपहार कार्यक्रम पाठकलाई लोभ्याउने कि झुक्याउने ? 112 Views
ब्रोडसिट अर्थात् ठूला आकारका दैनिक पत्रिकाहरूबीच विशेष प्रस्ताव, ‘कभरमाउन्ट’ वा अन्य कुनै रूपमा गरिने ‘सर्कुलेसन वार’ अर्थात् अखबारको बिक्री वितरण बढाउन गरिने ‘तिकडमबाजी’ जारी छ । ‘ज्ञानमा धनी टन्न मनी’को घोषणासहित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ले ल्याएको छ ‘एक लाख जितौँ हरेक दिन, पक्का उपहारमा बी.पी. मेसिन’ योजना । ‘उत्सव बन्दै छ महोत्सव, हामी आउँदैछौँ तपाईंको घरदैलोमा’ नारासहित ‘नयाँ पत्रिका’ मासिक स्कुटर, पाक्षिक ४० इञ्चको स्मार्ट टेलिभिजनका साथै ‘हातहातै रु. ५०००।–भन्दा बढी रकम को उपहारहरू’ लिएर ‘वार’मा होमिएको छ । ‘विश्वसनीय समाचार, हातहातमा उपहार’ नारासहित ‘लक्की ड्र’बाट स्कुटर, टेलिभिजन, मोबाइल सेट, लञ्च कुपनलगायत विभिन्न उपहारहरू दिएर ग्राहक तान्न ‘नागरिक’ टुपी कसेर लागेको छ । ‘द हिमालयन टाइम्स’को बम्पर उपहार छ, ‘रेनल्ट डस्टर’ कार र अन्य उपहारहरूमा मोटरसाइकल, स्कुटर, मोबाइल आदि । ‘राजधानी’को पक्कापक्की उपहार छ, ‘२ लिटर बराबरको पानी तताउने कित्ली’ । अन्य केही साप्ताहिक, मासिक तथा दैनिक तथा अखबारहरू पनि ‘सर्कुलेसन वार’को मैदानमा छन् ।
भर्खरै २५औं वार्षिकोत्सव मनाएको ‘कान्तिपुर’ भने तत्कालका लागि ‘सर्कुलेसन वार’को मूकदर्शक मात्र बनेको छ र सम्भवतः ‘छक्का’ हान्ने उचित समयको पर्खाइमा छ । कुनै बेला विदेश भ्रमणलगायतको योजना ल्याएको ‘गोरखापत्र’ भने ‘सर्कुलेसन वार’मा कमजोर अखबारहरूमध्ये एक साबित भएर पर्व–अवसरहरूमा छुट घोषणाको औपचारिकतामा खुम्चिएको छ । ग्राहकहरू मात्र होइनन्, अब त बिक्रेताहरू पनि ‘मछलीलाई चारो’को जालोमा पार्दैछन् ! कुनै दिन फलानो अखबारले फलानो पत्रिका बिक्रेतालाई फलानो (प्रतिस्पर्धी) अखबार नबेचेबापत पुरस्कृत ग¥यो (कमिसन बढी दियो !) भन्ने सुन्न प¥यो भने अचम्मको कुरो हुनेछैन । बजारमा कब्जा जमाउन चिसो पेय पदार्थका प्रतिस्पर्धीहरूले नेपाली बजारमा दुई तीन दशकयता यस्तो अभ्यास गरेकै हुन् । भूमण्डलीकरणले अखबार प्रकाशकहरूलाई पनि व्यापारीकरणमा लाग्न गजबले सिकाएको छ ।
कतै कोहीमाथि अन्याय, अत्याचार भएमा वा कतै अनियमितता भइरहेको भएमा त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने अखबारहरूले आफ्नै प्रकाशनगृहबाट ‘अखबार पाउने’ ग्राहकको अधिकार कुण्ठित भइरहेकोतर्फ किन ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ? तीन–चार वर्षअघिको कुरो हो, अखबार नियमित रूपमा पाइएन भनेर बारम्बार गरिएको गुनासोको सुनुवाइ नभएपछि एक जना पाठकले आक्रोशित भएर अमुक पत्रिकाका सम्पादक÷प्रकाशकलाई इमेल गरेका थिए ः ‘… वितरकहरूलाई यसरी नै ग्राहक ठग्न सिकाएको छ ? होइन भने बारम्बार ‘कम्प्लेन’ गर्दा गर्दै पनि स्थितिमा सुधार किन आउँदैन ? यस्तो प्रवृत्तिलाई ग्राहक ठग्ने संस्थागत प्रवृत्ति भनेर किन नभन्ने ?…।’ स्थिति सुध्रिएन । भड्किएको ग्राहक त्यसपछि ग्राहक नवीकरणका लागि फिटिक्कै मानेन ।
Previous अबको ५ वर्षमा कांग्रेस पहिलो दल ः महत
Next आजबाट झापा गोल्डकप झापा ११ र सुदुरपश्चिम भीड्दै